Heerka cusbada ku jirta cuntooyinka oo sarreysa - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Heerka cusbada ku jirta cuntooyinka oo sarreysa
La daabacay torsdag 12 september 2013 kl 13.47
Cuntooyinka qaarkood waxaa ku jira cusbo ka badan noocyo oo isla cuntooyinkaas ah. sidaasna waxaa lagu muujiyey daraasad uu saaray ururka macaamiisha Stockholm oo baaritaan ku sameeyey heerka cusbada ee boqolaal cuntooyin ah oo lagu iibiyo dukaamada iswiidhishka.
Cusbada cuntada ku badani waxay keeni kartaa cadaadiska dhiigga oo sare u kaca, taasina ay kordhiso khatarta in maskaxda dhiig ku furmo ama la qaado cudurada wadnaha iyo xididdada dhiigga. Waxaa dadka lagu la talinayaa in aysan cunin cusbo ka badan 5 ilaa 6 garaam maalintii. Hadda dadka Iswiidhen cusbo intaas laba goor ka badan. Cusbadaasna waxaa badankeed laga helaa cuntooyinka aan dukaamada ka iibsanno ama maqaayadaha ka cunno. Cusbada ku jirta hal saxan oo maqaayad laga cuno waxay u dhigantaa qiyaastii qofka loogu talagalay maalinta oo dhan.
Ururka macaamiishu wuxuu hadda doonayaa in la dejiyo istaraatajiyo qaran oo lagu yareynayo cusbada ku jirta cuntooyinka.